Maxaabiis xannuun ugu geeriyootay Cusbitaalka Burco | Berberanews.com
Home WARARKA Maxaabiis xannuun ugu geeriyootay Cusbitaalka Burco
Maxaabiis xannuun ugu geeriyootay Cusbitaalka Burco
Burco(Berberanews):- Ugu yaraan Laba Maxbuus ayaa Xanuun ugu geeriyooday Xabsiga magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer, 54 Maxbuus oo kale iyo Shan Askari oo ilaalada Jeelkaas ka tirsanina way u jiifaan Xanuunka Shuban-biyoodka oo ku dhacay, sida lagu sheegay War-Saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Cadaaladda Somaliland.
War-Saxaafadeed uu soo saaray Axaddii shalay Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Cadaaladda Jamhuuriyadda Somaliland Khadar Axmed Diiriye, ayaa Nuqul ka mid ah oo uu isagu ku saxeexnaa waxa uu soo gaadhay Warbaahinta Aftahannews.com, waxaanu War-Saxaafadeedkaas oo dhammaystirani u dhignaa sidatan:-
“Saaka Axaddii (shalay) 28/05/2017, ah waxaa Xabsiga magaalada Burco Xanuunka Shuban-biyoodka ugu geeriyooday Laba Maxbuus oo ka mid ah Maxaabiista Xukuman ee Xabsiga ku jirta.
Cudurka Shuban-biyoodka oo meelo badan oo waddanka ka mid ah hore uga dillaacay, waxaa calaamadihiisa lagu arkay Xabsiga Burco markii ugu horreysay shalayto (dorraad) Sabtidii, 27/05/2017. Illaa hadda waxa uu Cudurku soo ritay oo u jiifa Afar iyo Konton Maxbuus oo ka mid ah Laba Boqol iyo Toddobaatan Maxbuus oo Xabsiga ku jira iyo Shan Askari oo ka tirsan Ciidanka Asluubta Xabsiga Burco.
Iskaashi degdeg ah oo ay wada-jir u sameeyeen Wasaaradda Cadaaladda, Wasaaradda Caafimaadka, Ciidanka Asluubta, Xeer-ilaalinta gobolka Togdheer iyo Hay’adda ICRC, waxay ku guulaysteen inay hakiyaan fiditaanka Cudurkaas, iyada oo la raacayo dhammaan habkii xakamaynta Cudurka Shuban-biyoodka.
Dhammaan Shaqaalaha iyo Dhakhaatiirta ka hawlgala Xabsigu, iyaga oo hawshaas sii wada waxa ay dedaal ugu jiraan xakamaynta Cudurka, si looga badbaadiyo in uu ku sii dhex-faafo Maxaabiista kale ee weli aanu Cudurku saamaynta ku yeelan.” Sidaa ayaa lagu yidhi War-Saxaafadeedkaas uu ku saxeexnaa Wasiiru-dawlaha Wasaaradda Cadaaladda Somaliland Khadar Axmed Diiriye ee Aftahannews Nuqulka ka midka ah helay.
Previous articleMadaxweyne Silaanyo oo Itoobiya ugu hambalyeeyay Xuska 26 Guuradii ka soo wareegtay Mingiste Hayle Mariam
Next articleCiyaaryahanka ugu qaalisan adduunka oo cumro u tagay Maka